Barnoota Waliigalaa Baballisuu
Mirga walii gala kan barnootaa keessumaa ijoollee durbaaf kennuun, inverstmentii guddisuuf deebii isa ol aanaa dha. “Qorannaan dhiyeenyaa tokko akka mul’isutti, doolaara tokkoon tokkoon isaa mirga ijoollee durbaa fi barnoota isaaniif oolchuun, biyyoonni guddataa jiran doolaara $2 fi saantima 80 ta’ee akka deebi’uuf taasisa. Waggaan barnootaa itti dabalaa tokko, galii dubartii tokkoo dhibba irraa harka kudhanii gara digdamaatti ol guddisuu danda’a.
Itti dabaluu dhaanis, waggaan barnootaa itti dabalaa tokko tokkoon isaa dargaggoon tokko carraa walitti bu’iinsa keessa seenuu dhibba irraa harka digdamaan gad xiqqeessa. Kan nama gaddisiisu, weerarri COVID-19 sirna barnootaa naannoo addunyaa miidhee jira. Kanaaf ijoolleen durbaa, baqattoonnii fi namoonni biyya ofii keessatti mana qe’ee ofii irraa buqqa’an, amma iyyuu carraa mana barnootaa dhaquu argachuu hin dandeenye.
Kanaafi kan jarmayaan gargaarsa misoomaa addunyaa kan US USAIDn barnootaaf deggersa doolaara miliyoona $37 haaraa sagantaa “barnoonni dhaabatee hin eegu” jedhuuf kan labseef.
Sagantaan “barnoonni dhaabatee hin eegu” jedhu kun, barattoonni daree barnootaatiin ala akka baratan, humna aduutiin reediyoo hojjetu irratti barnoota tamsaasuu dhaan naannolee walitti bu’iinsi keessa jiru barnoonni akka dhaqqabu daandii itti dabalaa saaqa.
Naannolee wal waraansaan bututan Afgaanistaan, Yemenii fi Itiyoopohiyaa keessaa sagantaan kun ijoollee fi dargaggoonni moggaatti ittifaman kanneen miliyoonaan laka’aman barnoota isaanii akka itti fufan gochaa jira.
“Yunaayitid Isteetis, sagantaan “barnoonni dhaabatee hin eegu” jedhu bara 2016 erga hundeeffamee qabee gargaaraa jirti. Deggersa keenya illee guddisuu keenyaaf boonuutu nutti dhaga’ama… Sababiin isaas ennaa barnoota qulqullina qabu qixxee ennaa argamu, ba’iin isaas ifa gala dha: guddina dinagdee guddaa, bu’aa fayyummaa wayyaawaa ta’e, dimokraasii cimaa, hawaasa nagaa qabuuf daran cimaa akkasumas ijoollee fayyaalessa ta’anii fi milkaa’ina argatan argamsiisa jechuu dhaan gulaalaan har’aa yaada isaa xumura.